”Bonucci ugu dambayn wuxuu ku biiri doonaa Blues” – Paul Mariner – Gool FM
”Bonucci ugu dambayn wuxuu ku biiri doonaa Blues” – Paul Mariner
(London) 30 Juunyo 2017 – Qannaaskii hore ee Arsenal jaalle Paul Mariner ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in Chelsea ay la saxiixan doono Leonardo Bonucci xagaagan.
Xidigag Bonucci ayaa si xooggan loola xiriirinayaa inuu iska xaadirin doono xeebada Ingiriiska iyadoo ay aad u doonayso Chelsea waxaana inuu todobaadyada soo socdo kooxdaa ku biiri doono rumaysan Mariner.
Mariner ayaa ESPN FC u sheegay heshiiska dhici kara isagoo leh: “In ay lacagta kordhiyaan waa muhim. Juventus waxay is giijin doontaa intii macquul ah.
“Shakise kuma jiro in haddii uu doonayo Conte inuu u ciyaaro sida uu jecel yahay, in ninkaasi yahay midka uu rabo, wuxuu aasaasi u yahay shaxda 3-da difaac, wuuna heli doonaa ugu dambayn.” ayuu raaciyay.
Kooxda Bayern München oo soo bandhigtay funaanadda 2-aad ee ay ku ciyaarayso fasalka 2017-18 + Sawirro